Pakistana: Politika Ara-maoralin’ny Fifanomezam-potoanan’ireo Mpifankatia Nahatonga Fanakanana Fandaharana Iray Ao Amin’ny Fahitalavitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Febroary 2012 3:59 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Nederlands, srpski, Español, English
Ny 17 Janoary 2012 dia nandefa fandaharana amin'ny maraina ny tambajotra fampahalalam-baovao Pakistane Samaa TV izay nahitàna ny mpanolotra io fandaharana io, Maya khan, sy vondrom-behivavy salantsalan-taona nihodidina ireo toeram-pitsangatsanganan'i Karachi. Ny hany mba tanjon'izy ireo tamin'izany dia ny hanome ny anjarany ho an'ireo mpifankatia mitsidika ireo toeram-pitsangatsanganana ireo izay mifanao fotoana tsy eo ambany fahalalàn'ny mpambina azy akory.
Nandritra ity fandaharana ity ilay tarika dia hita nihaza ireo mpifankatia manodidina ilay toeram-pitsangatsanganana, nanery ny ankamaroan'izy ireo hitsoaka, nijoko ary avy eo dia naka an-dahatsary azy ireo tsy nahazo alàlana taminy akory. Koa satria niverimberina foana ny fangatahan'izy ireo ny amin'ny hamonoana ilay kamera, nolazaina izy ireo fa efa maty izany, nefa mbola nanohy naka an-dahatsary nisy feo am-pahamailoana ilay tarika avy amin'ny Samaa.
Nandritra ity fizaràna ity dia nangatahana ihany koa ireo mpifankatia hanamarina ny maha-mpivady azy ireo sy hampiseho ny taratasy fanamarinana ny maha-mpivady azy ireo ho an'ilay mpanolotra fandaharana Maya khan.
Sary avy ao aminà lahatsary Youtube. Tsindrio ny sary raha te hijery.
Mazava ho azy fa nampirongatra ireo fanoherana mafy avy amin'ireo mpampiasa ny media sosialy any Pakistana ity fizaràna ity, ary maro amin'izy ireo no nitroatra tahaka an'i Mehreen kasana, izay niteny hoe :
Jereo, latsaka anatin'ny fitiavana ny vehivavy isanandro vaky ao anatin'ny herinandro ary tsy latsaka izany koa ny lehilahy. Indraindray mandeha amin'ny hitsiny ny fanapahan-kevitr'izy ireo, indraindray kosa dia diso izany. Izany no atao hoe olombelona. Nefa minoa ahy, tsy mila vondrom-behivavy salantsalan-taona iray izy ireo handrahona azy eny amin'ny toeram-bahoaka mba hanazava aminy ny fanapahan-kevitra noraisiny. Ary minoa koa ahy, ho tantin'ireo reniny avy ny zava-mitranga na inona izany na inona. Tsy misy na iray aza nangataka anao na olon-kafa hizaka ny andraikitra amin'ny fanaraha-maso azy ireo.
Hita manerana ny Twitter sy Facebook iray manontolo any Pakistana ny fahatezerana aorian'ny fandefasana ity fizaràna ity. Bina Shah in her piece for the Tribune remarked:
Efa impiry impiry moa no mampametra-panontaniana ny fepetran'ny media-ntsika, satria manompo ny fikarohana zavatra mampientanentam-po mba hahazoana salan'isa ambony indrindra. Io fantsona fahitalavitra resahana io dia hanoka-baravarana amin'ny fanenjehana araka ny lalàna ataon'ireo niharan'ny fandrahonany izay azo an-tsary anatin'ny fahitalavitra nefa tsy nahazoana alàlana akory. Ny fampielezana izany ihany koa dia miantso ny fanahy ratsin'ny fiaraha-monintsika mpihatsaravelatsihy amin'ny fanaovana fitsaràna ara-tsaina amin'ny anaran'ny soatoavin'ny fianakaviana manoloana olona roa tsy manan-tsiny, izay mahatonga ny sasany amin'ny fandaharan'ny fampahalalam-baovao tsy mahatsiaro tena alefa amin'ny fahitalavitra hita any Pakistana ankehitriny.
Namoaka sy nanomboka fanangonan-tsonia antsoina hoe ATSAHARO ny fiarovantenan'i “Subah Saverey Maya kay Sath” toa an'i Lal Masjid ao amin'ny aterineto ny vondron'olona mafana fo avy amin'ny fiarahamonina sivily amin'io sehatra io ho enti-manohitra ity fandaharana ity. Am-polony ihany koa ireo olona nitaraina tamin'ny PEMRA (Manam-pahefana mikasika ny Fampanarahan-dalàna ny media elektronika any Pakistana) avy amin'ny alàlan'ny famenoana pejy tamberina ao amin'ny aterineto.
Namolavola taratasy fohy maneho ny hatezerana amin'ny toetran'ity mpanolotra fandaharana ity izay tia mitsabatsabaka, midikiditra sy tsy dia mivaky loha diso tafahoatra ny mpisolovava iray Osama Siddique ny 12 Janoary. Nalefan'ny vondron'olom-pirenena ho an'i Zafar Siddiqi (Filohan'ny CNBC Pakistana, izay mifandray amin'ny Samaa TV) ity taratasy ity sy taratasy iray fanaraha-maso.
Nanamarika i Beena Sarwar, mafana fo iray amin'ny fiarahamonina sivily izay tafalatsaka lalina anatin'ity fanoherana ity, ao amin'ny lahatsorany “No to vigil aunties (Tsia ho an'ireo nenitoa mpiambina” :
Ny fotoana voalohany indrindra nahitako rohy iray mankany amin'io fandaharana io dia ny 22 Jan, nozaraina tanatina vondrona Facebook iray, ny 21 Jan 2012. Izaho, sy ireo maro hafa, nanomboka nizara ireo rohy Youtube ao amin'ny Facebook sy Twitter. Arakaraky ny nampiparitaka izany no nampitombo ny hatezerana.
Nisafoaka ny vahoaka tamin'ny haavon'ity fitsabahana sy fiambenana mitranga ity. Any Inde, tonga ireo tsikera momba ny brigady mpiaro Saffron izay malaza amin'ny fanosehana ireo mpifankatia hiditra toeram-pivavahana ary hanerena azy ireo hivady eo noho eo. Izay nampahatsiahy ahy fa tsy voafetra ho any Pakistana irery ilay fisainana izay hiadiantsika amin'izao.
Sary natolotr'i Teeth Maestro
Ny 23 Janoary dia nahazo sonia 4800 tao aminy ilay fanangonan-tsonia tao amin'ny aterineto voalaza ery aloha, maro ireo lahatsoratra nosoratana mikasika ny zavatra tsy mety amin'ity karazana fampahalalam-baovao anaty fahitalavitra ity; ity tsindry mitambatra ity no nitarika tamin'ny famafàna ny pejy Facebook-n'i Maya Khan ary ny fanesorana ireo rohin'ny fandaharany tao amin'ny YouTube.
Tanatin'ny fandaharany ny 23 Janoary dia nifona noho ilay fizaràna i Maya khan ary nanamarika fa tsy natao handratra ny vahoaka izany. Na eo aza anefa izany, ireo mpitolona avy amin'ny fiarahamonina sivily amin'izao fotoana izao dia mangataka fifonana ampahibemaso ary tsy misy fepetra sy ny fanafoanana ity fandaharana ity ao amin'ny fantsona. Nanomboka niantefa tany amin'ireo mpanohana ity tambajotra ity ary indrindra indrindra ity fandaharana ity ihany koa ireo ezaka.
Namaly izany taratasy nalefa taminy izany ny Samaa TV tamin'ny fangatahan'izy ireo an'i Maya khan hifona tsy misy fepetra nefa dia nolaviny izany, izay namerenan'i Zafar siddiqi nanoratra ny 28 Janoary mba hampahafantatra fa natsahatra i Maya khan sy ny tariny ary tsy handeha intsony amin'ny fahitalavitra ny fandaharany manomboka ny 30 Janoary.
Araka izany dia androany no andro voalohany tsy andehanan'io fandaharana io. Fotoana manana ny toerany izao eo amin'ny tantaran'ny fandefasana fandaharana amin'ny fampitam-baovao sy ny media sosialy satria dia tonga ny fahatongavan-tsaina fa na ekena aza ny fihoàrana ny fetra amin'izany, misy ireo fetra ary tokony hodinihana izy ireny. Na raharaha inona izany na inona dia zavatra mialoha tsara ho an'ny fiarahamonina sivily ny mifandrindra sy manamafy ny zo tahaka ny zo amin'ny fiainan'ny tena manokana sy ny fifaneraserana malalaka tsy misy fandrahonana avy amin'olona any Pakistana.